जस्तोसुकै बिजि भ एपनी एकपटक पढौ ! नपढे तपाइलाइ पछुतो हुनेछ।।। – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जस्तोसुकै बिजि भ एपनी एकपटक पढौ ! नपढे तपाइलाइ पछुतो हुनेछ।।।
जस्तोसुकै बिजि भ एपनी एकपटक पढौ ! नपढे तपाइलाइ पछुतो हुनेछ।।।
मैले यो देख्ने कोसिस पनि गरिन कि साच्चिकै उनलाई कति ज्व’रो थियो मैले त्यस्तो केही गरिन कि उनलाई लागोस कि बिरामीमा उनी एक्लि छैन तर मलाई सानो तिनो रु’घाखो’की लागेर टा’उको दु’खिरहेको थियो तर उनी मेरी आमा बनिन म सोचिरहे कि साच्चिकै के भगवानले महिलालाई एउटा अ’लग्गै दिल दिल्छन ? महिलाहरुमा जुन करुणा र ममता हुन्छ त्यो पुरुषमा किन हुदैन ? सोच्न थाले ,जुनदिन मेरी पत्नीलाई ज्व’रो आएको थियो , त्यो मध्यान्नमा जब उनलाई भो’क लागेको होला र ओ’छ्यानबाट उ’ठ्न न’सकेकि हो’ली, त्यतिखेर उनले पनि सोचेकी होलिन कि कास मेरो पति आज मसित हुन्थ्यो भने ? नेपालमा कोरोना संक्रमणले रुप परिवर्तन गर्ने सम्भावना, सबै सचेत रहनु पर्छ : डा. शेरबहादुर पुन (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरहरुमा कोरोनाभाइरस संक्रमण बढेको भन्दै चिन्ता जनाउन थालिएको छ । तर, समुदायमा कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिएको पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल अन्र्तगतको क्लिनिकल रिसर्च युनिट प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनले जानकारी दिए । समुदायमा संक्रमण देखिएको भनिए पनि यसलाई अनुसन्धानले पुष्टि गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका डा पुनले हालसम्म युवा समूहमा बढी कोरोना संक्रमण देखिएको बताए ।
घरबाहिर कामकाजका लागि युवा हिँड्ने भएकाले उनीहरु संक्रमणको जोखिममा परेको प्रस्टाएका उनले तर, अब अवस्था यही रहिरहन्छ भन्ने नरहेको जानकारी दिए । घरमै रहेका केही व्यक्तिमा देखिएकाले कोरोना संक्रमणले रुप परिवर्तन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
हालसम्म युवा समूहमा कोरोनाको संक्रमण रहेकाले मृत्युदर निकै कम रहेको बताएका डा. पुनले अहिले कोरोना संक्रमितको मृत्युदर शून्य दशमलव २५ रहेको जानकारी दिए । तर, आममानिस सचेत नहुने हो भने यसको प्रतिशत बढ्नेको उनको चेतावनी छ ।
लकडाउन हटाएसँगै सार्वजनिक यातायात सुचारु भएका छन् भने बजार पसल, कार्यालय पनि खुलेका छन् । मानिस आफ्नो पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् । तर, सावधानी नपनाउने हो भने अहिले युवा समूहमा संक्रमण देखिएको जेष्ठ नागरिक र बालबालिकामा पुग्ने उनको चेतावनी छ ।
युवाबाट जेष्ठ नागरिक र बालबालिकामा कोरोना संक्रमण फैलिएमा मृत्युदर बढ्ने चिकित्सक पुनको भनाइ छ । सरकारले कडा गर्ने भन्दा पनि आममानिस स्वयं सचेत रहनु पर्ने उनको सुझाव छ । यदी सर्वसाधारणले लापरवाही गरेमा जेष्ठ नागरिक र बालबालिकामा कोरोना संक्रमण हुने र मृत्युदर ३ देखि ५ प्रतिशत पुग्ने उनको चेतावनी छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणको अवस्था, उपचारको प्रक्रिया, नियन्त्रणको उपायलागयत समग्र विषयका क्यानडानेपालका सञ्जिव न्यौपानेले डा. शेरबहादुर पुनसँग गरेको यो भिडियो कुराकानी :
श्रीमतीलाई परपुरुषसंग देखेपछि बिरक्तिए अभिनेता दिलिप रायमाझी भिडियो हेर्नुहोस।
नेपालमा अब निजी जहाज राख्न पाइने !